कोरोनाभाइरस कमोडिटी बजार हिलाउँछन् अर्थव्यवस्था वित्त
Coronavirus कमोडिटी बजार हिलाउँछ
कोरोनाभाइरसको आगमन पछि, बजार अनिश्चितता, डर र वोल्टेलिटीले संक्रमित हुन थालेको छ, जसले सानो प्रभाव छोडेको छ र यसले आफ्नो प्रभाव अनुभव गरेको छैन। धेरै कम्पनीहरूले उनीहरूको व्यावहारिकतासँग सम्झौता गरिरहेको छ। तिनीहरूमध्ये केहीले कुरा गर्छन् कि उनीहरूको दिवालियापनबाट बच्न राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ, र कच्चा मालसँग सम्बन्धित अन्यहरू कम भाग्यमा छैनन्।
महामारी महामारी बन्नु भन्दा पहिले, र यो पनि अस्तित्व हुनुभन्दा अघि, वस्तु बजार पहिले नै केहि अद्वितीय क्षण को माध्यम बाट जाँदै थियो। सबै भन्दा माथि, बहुमूल्य धातुहरूको, र प्यालाडियम जस्ता उत्पादहरूको निर्माणको लागि कुञ्जी, कार, क्यापेसिटरहरू, र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको लागि उत्प्रेरकहरू प्रयोग गर्न प्रयोग गर्‍यो। यद्यपि अमेरिका र चीनबीच हुन सक्ने तनावले प्रख्यात सेफ हेवन मूल्य र यसका "समरूप" सुन र चाँदीको मूल्य बढायो। तर हामी कहाँ जाँदैछौं?
1 सुन कन्सोलिडेट गर्दै छ, तर यसको चढाईमा पछाडि फर्कदैन
2 तेल मूल्य मा डूब र पतन को छेउमा छ
3 खाद्य staples सम्बन्धित वस्तुहरु
सुन कन्सोलिडेट गर्दै छ, तर यसको चढाईमा पछाडि फर्कदैन
पछिल्लो समय सुन प्रति औंस १,1.700०० थियो, यो २०१२ को अन्त्यमा थियो। त्यसबेलादेखि बजार र लगानीकर्ताको विश्वासले यसलाई फेरि वरिपरि धकेल्यो २०१ of को अन्त्यमा प्रति औन्स १,०००। ब्रेक्सिटले युरो क्षेत्रमा केही संरचनात्मक समस्याहरू र आउने बर्षहरूमा भएका केहि घटनाहरूले यसका कारण आगामी केही वर्षहरूमा १ years०० डलरको अनुमानित मूल्यमा पुग्यो।
अर्कोतर्फ, दुई शक्तिहरूको तनाव, अमेरिका र चीनले यसको मूल्य बिस्तारै बढ्न थाल्यो। २०१ In मा, सुनले त्यो अवरोधलाई तोड्यो र लगभग $ २०० डलर प्रति औंस बढाउन सफल भयो, बहुमूल्य धातुलाई $ १2019०० को आसपास राख्दै। र जब यस्तो लाग्यो कि कुनै सम्झौता सम्पन्न हुनेछ, र बजारहरू "शान्त" देखिन्थे शान्त हुन, कोरोनाभाइरसले औंसलाई १,$०० डलरको माथि धकेल्यो। साथै, धेरै अस्थिरताका साथ धेरै क्षेत्रहरू। ठिक छ, यस मंगलबार हामीले ounce १1.800०० पुगेको केही समयपछि औन्स देख्यौं, जबकि यस शुक्रबार यो लगभग $ १०० कम व्यापार गर्दै थियो।
यसले हामीलाई कहाँ लिन्छ? २०० 2008 को स्कटको कारण सुन आउँदै गरेको बर्षहरूमा निरन्तर बढ्दै गयो। यसको मतलब यो होइन कि यो विचार कोरोनाभाइरसको साथ एक्स्टोपोलेट हुनुपर्दछ, किनभने त्यो संकट वित्तीय प्रणालीको थियो। यद्यपि यो स health्कट स्वास्थ्य हो र यसले विभिन्न उत्पादन श्रृंखलालाई असर गर्ने क्वारेन्टाइन, कैद, र व्यापार प्रतिबन्ध लगाएर धेरै क्षेत्रहरूलाई असर गरेको छ। अर्कोतर्फ, के कुरा पक्का छ कि बै्कहरूले पैसा "प्रिन्ट" गर्न थालेका छन्, जुन एक पटक चलनमा पर्दा "सम्पत्तिको मूल्य" बढाउनु पर्दछ। यस मामलालाई ध्यानमा राख्दै, कोरोनाभाइरसको स over्कट धेरै टाढा छ र सरकारहरू अझै गतिविधि कसरी अलि अलि गर्दै सुरु गर्ने भन्ने बारे सोचविचार गर्दैछन्, धातुको पुनर्मूल्यांकन देख्न सकिन्छ।
तेल मूल्य मा डूब र पतन को छेउमा छ
यदि केहि रातोमा राम्रो भएको छ भने, यो तेल क्षेत्र हो। तेलको उत्पादन इराकमा अगस्टमा रेकर्डमा पुगेपछि यसको मूल्यमा भएको गिरावट रोक्नको लागि साउदी अरेबिया र रसियाले केही दिन अघि एउटा सम्झौता गरेको थियो रक्तस्राव रोक्न। विशेष रूपमा, र ओपेकसँग आपतकालीन बैठक पछि, तिनीहरू सहमत भए यसको उत्पादन २० लाख ब्यारल प्रति कटौती गर्नुहोस् दिन यो सम्झौता तेलको लागि एकै दिनमा उच्च रेकर्डको कारण भयो, जहाँ यो %०% भन्दा बढि बढ्यो।
यद्यपि कोरोनाभाइरसले तेलको कम खपत भएको आरोप लगाउँदैछ, र यसको लागि लगभग कुनै भण्डारण ठाउँ छैन। ट्याks्कहरू, पाइपलाइनहरू र भूमिगत गुफाहरू उनीहरूको सीमामा पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सी (आईईए) ले यस हप्ता एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यो जसमा यसले सञ्चार गर्दछ धेरै क्षेत्रहरू तिनीहरूको क्षमता सीमामा पुगेका थिए। यो पनि अवलोकन गरियो कि महामारीको प्रभावले तेलको मागमा २ 25% ले कटौती गरेको छ। प्रति दिन १० करोड ब्यारेलबाट 100 75 करोडमा जान्छ।
यदि भण्डारण क्याप्स व्यापक रूप मा पुगेको छ, तेल पम्पिंग रोकिनु पर्छ। त्यो पतनले ब्यारलको मूल्य अझ तल्लो तहमा लिन सक्दछ कि उनीहरूले आशा गरेनन्। र यो सबै ठूलो चिन्ता बजारमा हस्तान्तरण गरिएको छ जहाँ हामीले देखेका छौंaब्रन्ट तेल प्रति ब्यारल २$ डलरमा नजिक छ, र डब्ल्यूटीआई तेल १$ डलरमा बन्द छ यो शुक्रवार, अप्रिल १।।
सबै तेल कम्पनीहरु प्रभावित भएको छ। रिप्सोल, रोयल डच शेल, एक्जोन मोबाइल, कुल ... यदि बजार ठीक भयो भने, महामारी फैलिंदै गइरहेको छ, र यसको उत्पादनमा कटौतीले प्रभाव लिन्छ, यो स्थिति ओगट्न रोचक हुन सक्छ। यद्यपि आज अझै कठिन समयहरू अगाडि छन्, र कालो सुन र सूचीबद्ध कम्पनीहरूको मूल्यमा अन्तिम गिरावट, तिनीहरूलाई देखेर यो अनौंठो हुनेछैन।
खाद्य staples सम्बन्धित वस्तुहरु
सबै कच्चा मालको बजारमा आएको छैन। खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा उदाहरणका लागि, मार्चमा सब भन्दा बढि विषयहरू मध्ये एक "सुन्तला रस" थियो। एउटा कारण ठिकसँग भिटामिन सी को कारण थियो, र यो हो कि भाइरल महामारीले यसको उपभोगलाई प्रोम्प्ट गर्‍यो जब यो शरीरको लागि समावेशी बहु लाभकारी गुणहरूको बारेमा थाहा थियो।
ओरेन्ज जुसको उपभोगको समान लाइनमा हामी कफी पाउँछौं। कफोरन्भाइरसका कारण मानिसहरूमा हुने क्वारेन्टाइन र व्यक्तिमा पर्ने असरको परिणामको रूपमा यसको खपत बढी माग भएकोले कफीको उपभोगलाई पनि बढावा दिइएको छ। यस अवस्थामा यसको मूल्य वृद्धि करीव १ 15% थियो।
पिठो र गहुँको माग पनि बढेको छ आधारभूत आवश्यकताहरूको रूपमा, उनीहरूको मूल्य क्रमशः १२ र%% बढाउँदै। यद्यपि यो भन्न जोखिमपूर्ण छ, कच्चा पदार्थको खपतमा भएको वृद्धिलाई चिन्ताको विषयले उत्प्रेरित गर्न सक्छ जहाँ धेरै मानिसहरूलाई खुवाइन्छ। जे होस्, यो दावी केहि हदसम्म गलत हुन सक्छ, केहि अरूलाई कडा हिट गरियो। उदाहरण पाउन सकिन्छ मकै, जहाँ मार्चको महीनामा यो झरेको र करिब २०% ले घट्यो। आधारभूत उत्पादनहरूमा अवरोधका अन्य उदाहरणहरू चिनी, कोको वा काठमा पाउन सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » Coronavirus कमोडिटी बजार हिलाउँछ
एस्ट्रिड फर्नांडीज भन्यो
कोरोना भाइरस महामारीको क्रममा बदलिएको बजार र अर्थव्यवस्थाले पहिलो हातका उत्पादनहरूको मागमा उल्लेखनीय बदलाव ल्याएको छ। म विश्वास गर्दछु कि यस लेखमा उल्लेख गरिएका सम्पत्तिहरू विश्वव्यापी स by्कटबाट प्रभावित भएका मुख्य मध्ये एक हुन्।
आधारभूत खाद्यान्न उत्पादनको मागको बृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन समाचार र राष्ट्रिय समाचारपत्रहरूमा धेरै सुनिन्छ, यद्यपि प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने खाद्य पदार्थहरूको बृद्धिलाई संकेत गर्दै धेरै रोचक थिए। सुन्तलाको रसको मागको मागले बृद्धि गरेकोले उपभोक्तालाई आफ्नो पोषणकारी लाभहरूबारे कत्तिको सूचित गरिएको छ भन्ने कुरा पनि झल्किन्छ, जैसा कि उल्लेख गरिएको छ, यो यसको भिटामिन सी को लागि खपत हुन्छ।
तेलको माथि उल्लेख गरिएको विषय धेरै चाखलाग्दो छ, किनभने यसको उत्पादनको मूल्यमा भएको विरोधाभासको बिरूद्ध, तेलको मूल्य यसको घट्दो प्रयोगका कारण पर्याप्त ह्रास हुन्छ। तेलले स्टोरेज स्पेसको अभावले बेच्न नसकेमा ल्याउन सक्ने समस्या र तेलको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा पतन नहोस् भनेर यस समस्याको समाधान गर्न खोज्नुपर्ने जरुरी समस्यालाई यसले विचार गरेको थिएन।
महामारीको कारण मूल्य परिवर्तनमा सान्दर्भिक र चाखलाग्दो जानकारी।
एस्ट्रिड फर्नांडीजलाई जवाफ दिनुहोस्
कसरी एउटा अनुकूलित पेन्सन योजना सिर्जना गर्ने?
खतरामा स्पेनी सार्वभौम बन्धन